मिठो निद्राका लागि सुत्नुअघि के नगर्ने ?
पुस २२, २०७३ शनिवार ००:००:०५ प्रकाशित
सामान्यतः मानिसहरु खाना खाएपछि एक कफ चिया या कफी पिउन मन पराउँछन् । तर, यदि तपाईंलाई राम्रो निद्रा चाहिएको छ भने यो बानी छाड्नुस् । यदि चियाकफी खानुहुन्छ भने समयमा निद्रा नलाग्ने त छ नै, आएको निद्रा पनि खलबलिने सम्भावना हुन्छ । चिया या कफीमा पाइने क्याफिनले निद्रा भगाउने काम गर्छ । राती सुत्नुअघि खान नहुने खाद्यपदार्थमा चकलेट एक नम्बरमा पर्छ । यसले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ । यसमा चिल्लोपदार्थ र क्याफिनको मात्रा बढी हुन्छ । जसले निद्रामा बाधा पार्छ ।
एक अध्ययनअनुसार राती सुतनुअघि रक्सी सेवन गर्नाले मष्तिष्कमा अल्फा उर्जा बढ्छ, जसबाट निद्रामा असर पुग्छ । सुत्नुअघि रक्सी सेवन गर्नेहरुलाई सुरुमा हल्का निद्रा परेपनि पछि यसले गहिरो निद्रामा खलल पार्छ ।
राती सुत्नुअघि मसालेदार खाना बढी खानाले अनिद्राको समस्या आउन सक्छ । तेल, खुर्सानीजस्ता मसालेदार खाना खाएपछि एसिड रिफ्लेक्सको समस्याका कारण निद्रामा असर पर्न सक्छ । यसैले सुत्नु दुई घण्टा अघि खाना खानुपर्छ भनिएको हो । शरीरलाई हाइड्रेट राख्न र विषालु तत्व बाहिर निकाल्न अधिकमात्रामा पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । तर, सुत्नुअघि धेरै पानी पिउदा निद्रामा असर पर्न सक्छ । किनकि धेरै पानी पिउनाले राती पटकपटक बाथरुम जानुपर्ने हुन सक्छ ।
यदि राम्रो निद्रा चाहनुहुन्छ भने धूमपान अहिल्यै छाड्नुस् । सन् २०१३मा गरिएको एक अध्ययनले एउटा खिल्ली चुरोटले १.२ मिनेटका निद्रा खलबलिन्छ । किनकि चुरोट पिउँदा हाम्रो शरीरले बाहिरैबाट निकोटिन लिने बानी पर्छ, जबकि सुत्दाखेरि नै प्राकृतिक रुपमा निकोटिन शरीरलाई मिल्छ ।
३. सरकार होइन, डा केसी पो रहेछन् कम्युनिस्ट
४. डा केसीको पक्षमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा अान्दोलन (फोटो फिचर)
५. डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल, जुनसुकै बेला मुटु बन्द हुन सक्ने खतरा